Lahatsoratra nataon'i Nate Gadzhibalaev momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Nate Gadzhibalaev
Nate no mpanorina ny Amplifr, serivisy manampy ny olona sy ny orinasa amin'ny alàlan'ny fandaharam-potoana fandefasana azy ireo ny media sosialy, manampy azy ireo hahazo vola bebe kokoa. Miaraka amin'ny làlan-kizorana amin'ny fitantanana ny vokatra, ny fampandrosoana ny orinasa ary ny fitomboan'ny sehatra iraisam-pirenena, mikendry ny hanampy olona sy orinasa izy amin'ny alàlan'ny fampisehoana amin'izy ireo ny fomba ahafahan'izy ireo mampiroborobo ny mpihaino azy amin'ny fomba mahomby sy mahomby.
Talata, May 15, 2018 Alakamisy Febroary 25, 2021 Nate Gadzhibalaev
Ny fandrafetana ny lahatsoratry ny haino aman-jery sosialy dia tokony ho ampahany manan-danja amin'ny tetikadinao amin'ny marketing ara-tsosialy, ary tsy ilaina intsony ny milaza fa manana tombony maro. Ankoatry ny tsy fieritreretanao ny handefa amin'ny sehatra media sosialy imbetsaka isan'andro, dia hitandrina fandaharam-potoana tsy miovaova ianao, handrafitra atiny tsy misy dikany amin'ny fotoana, ary hanana zara fizarana mahasalama satria afaka mikasa mialoha. Raha tokony ho eo amin'ny sehatra media sosialy isan'andro isan'andro, ny fandaharam-potoana